Uhambo lwe-imeyile kwi-Inbhokisi | Martech Zone
Uhambo lwe-imeyile kwi-Inbhoks
NgoLwesine, Aprili 26, 2012 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Besixubusha nje kumxholo wokuthengisa uluvo lwewebhu namhlanje kunye nenkampani yesizwe ukuba kanjani Uyilo lwe-imeyile kunye nokusebenza kwentengiso ye-imeyile kutshintshile ngenxa yendlela abathengi ababonelela ngayo kunye nendlela ezisebenza ngayo izixhobo ze-imeyile. Nge-30% yeimeyile ezifundwayo kwiselfowuni, kubaluleke ngakumbi kunangaphambili ukuyila ii-imeyile zakho ngokufanelekileyo ... kwaye uzivavanye!
Ukuhanjiswa kwe-imeyile kusenokungahambi kakuhle, nokuba uxhobile ngolu lwazi. Yenza umkhwa wokuvavanya wonke umyalezo owuthumelayo kubathengi abakhulu be-imeyile ngaphambi kokuthumela. I-Litmus ibonelela ngeentsuku ezisixhenxe Uvavanyo lwe-imeyile kuko konke ukubhaliswa okutsha!
Baye badibanisa le infographic eluncedo kwindlela eya kwi-imeyile kwi-Inbox, yintoni engahambi kakuhle, kunye nendlela onokuyilungisa ngayo!
tags: kweenkonzoemailukuhanjiswa kwee-imeyileuhambo lwe-imeyileUkunikezelwa kwe-imeyileUvavanyo lwe-imeyile
I-Issuu: Isixhobo sokuThengisa, hayi iiMagazini kuphela
IBravo: Thatha ubungqina beVidiyo kwi-Intanethi